आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १४ गते। आइतबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 Last updated Sep 29, 2018
इश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर ३० तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– पञ्चमी, ६:०७ बजेदेखि षष्ठी, २८:३० बजेउप्रान्त सप्तमी। नक्षत्र– रोहिणी, २५:३८ बजेउप्रान्त मृगशिरा। योग– सिद्धि, २१:०० बजेउप्रान्त व्यतीपात। करण– तैतिल, ६:०७ बजेदेखि गर, १७:२१ बजेपछि वणिज, २८:३० बजेउप्रान्त भद्रा। आनन्दादिमा धाता योग। चन्द्रराशि– वृष। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:५६ बजे, सूर्यास्त– १७:५० बजे र दिनमान २९ घडी ४ पला। षष्ठी श्राद्ध। द्विपुष्कर योग २८:३० बजे प्रारम्भ।
अनावश्यक कुराको बहसमा आफ्नो शक्ति बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंले तर्कबाट कहिल्यै केही पाउनुहुँदैन तर केही अवश्यै गुमाउनु हुनेछ भनेर आफैलाई सम्झाउनुहोस्। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। तपाईंको रोमान्टिक साथीले तपाईंमाथि चापलूसी गर्ने कुरामा सावधान रहनुहोस् – यो संसारमा मलाई एक्लो नछोड्नुहोस्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै तपाईंको लागि स्वर्गदूत हो, र तपाईंलाई यस कुराको आज थाहा हुनेछ।
दिन व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य ठीक रहनेछ। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। पत्नीसँगको झगडाले मानसिक तनाउ उत्पन्न गर्न सक्छ। अनावश्यक तनाउ लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले बदल्न नसक्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सिक्नु जीवनमा एउटा ठूलो कुरा हो। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
आफ्नो उच्च आत्मिक शक्तिको बाबजुद तपाईं आज तपाईंसँग हुन सक्ने कसैको याद गर्नुहुनेछ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
आज तपाईंको भरोसा बढ्नेछ र प्रगति निश्चित छ। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। जीवन र कामको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोणमा नैतिक र पूर्णतावादी हुनुहोस्। न्यानो हृदय र अरूलाई मार्गदर्शन र मद्दत गर्ने जन्मजात उत्तेजना प्राप्त कोई पनि राम्रो मानव हुन सक्छ। यसले तपाईंको पारिवारिक जीवनमा स्वतः सामंजस्य ल्याउन सक्छ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
आफ्नो साँचो क्षमता महसुस किनकि तपाईंमा बलको कमी छैन तर इच्छाको कमी छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। साना बच्चाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछन् र आनन्दित गराउनेछन्। आज आफ्नो प्रियलाई क्षमा गर्न नबिर्सनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग तनाउमुक्त दिन बिताउनु हुनेछ।
तपाईंमा असीम ऊर्जा र उत्साह आउनेछ र तपाईंले आफ्नो फाइदाको लागि कुनै पनि मौका प्रयोग गर्नु हुनेछ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। मित्र र आफन्तहरूले सहायता गर्नेछन् र तपाईं तिनीहरूसँग एकदम खुसी हुनुहुनेछ। आकाश चम्किलो देखिन्छ, फूलहरू अझै रंगीन जस्तो लाग्छ, र सबै नै तपाईं वरिपरि प्रकाशित हुनेछ; किनभने तपाईंलाई प्रेम भएको छ! व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै रमाइलो साँझ बिताउन सक्नु हुनेछ।
घाँटी / पिठ्युँको लगातार दुखाइले पीडित हुन सक्नुहुन्छ। सामान्य कमजोरी पनि भएमा यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आज अरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। यदि तपाईंले तुरुन्तै आवश्यक नभएको कुरामा पैसा खर्च गरेमा तपाईंको जोडीलाई राम्रो लाग्ने छैन। तपाईंले आज अन्धो प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव भएको पाउनुहुनेछ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। आफ्नो कुराकानीमा स्वाभाविक हुनुहोस् किनभने एउटा कार्यले तपाईंलाई कतै न कतैको बनाइदिन्छ। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
जीवनलाई लिएर एउटा उदार मनोवृत्ति बनाउनुहोस्। आफ्नो बाँच्ने अवस्थालाई लिएर उजुरी गर्ने र दुखी हुने कुनै काम छैन। यो जीवनको सुगन्ध नष्ट गर्ने र शान्त जीवन बाँच्ने आशाको हत्या गर्ने नीच सोचाइ हो। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि – छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। तपाईंको उदास जीवनले तपाईंको जोडीलाई तनाउ दिन सक्छ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईंले आज आफ्नो वैवाहिक जीवनका एउटा कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
स्वास्थ्यलाई निश्चित नै हेरविचारको आवश्यकता पर्छ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। घरेलु कामले तपाईंलाई अधिकांश समय व्यस्त राख्नेछ। रोमान्स आज नराम्रो हुनेछ र तपाईंको कुनै पनि अनमोल उपहार / इनामले आज जादु गर्ने छैन। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। एउटा अपरिचितले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच झगडा हुन सक्छ।
तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। रमाइलो साँझका लागि मित्रहरूले तपाईंलाई आफ्नो ठाउँमा निमन्त्रण गर्नेछन्। तपाईंको प्रियतमा आज आफ्नी जीवित दूत बन्नेछिन; यस क्षणको कदर गर्नहोस्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। आफ्नो जोडीसँग आज आफ्नो जीवनको सबैभन्दा रोमान्टिक दिन हुन गइरहेको छ।
धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।